MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: သိန်းစိန် ပြီးတော့ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းဆုရှင်နှင့် ဒယိမ်းဒယိုင် သိုင်းကွက်များ
“စစ်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြရတဲ့ ကလေးတွေကိုရဲ့အခြေအနေမှာ camp ထဲ မှာဖမ်းထည့်ထားပြီးမှ ဒီကလေးတွေကို အလွတ်ကျက်ပြီး ရွတ်ဖတ်ခိုင်းထားတာဟာ ပညာရေးမဟုတ်ပါဘူး ပိုပိုဆိုးဝါးတဲ့ အမိန့်နာခံရေး ပညာရေးစနစ် တခုကိုဖန်တီးလိုက်သလိုပဲဖြစ်လာပါတယ်” ဟု သူမက ဆက်ပြောပြသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများတွင် အစိုးရအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်ခိုလုံလာသောကလေးများအတွက် ပညာရေးသင်ယူခွင့် အခွင့်အရေးများ အတိုင်းတာကလေး မဆိုသလောက်တော့အချို့ရရှိနေသော်လည်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နယ်မြေ နှင့် ထိစပ်သောနယ်စပ်ဒေသများတွင် ခိုလုံနေသော ဒုက္ခသည်ကလေးများအတွက်မူ ပညာရေးအတွက်အရာရာ အခက်ခဲပြဿနာရင်ဆိုင်နေရပြီး အဆိုပါ ကလေးများ၏ ပညာရေးအနာဂတ်အတွက် လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ငြမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ မည်သည့် သံတမန်များနှင့် မှ နွေးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် သံတမန် အသိုင်းဝိုင်းက ပြောဆိုနေခဲ့ပါသည်။
ယခုချိန် ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေသော ကချင်လူမျိုးကလေးအရေအတွက်၏ 38 ရာခိုင်နှုန်းသည် ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွင် နစ်နာနေခြင်းဖြစ်နေကြသည်ဟု ကချင်ဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကသတင်းပေးသည့်အနေဖြင့် ပြောပြသည်။
“ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်က အခုလောလောဆယ် ၂ နှစ်ဆုံးရှုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၁နှစ်သာထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီကလေးတွေ စာသင်တန်းကိုပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူး အဲဒါ သူတို့ရဲ့တစ်သက်လုံးကျောင်းနဲ့ဝေးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဒီလိုကျောင်းနဲ့ဝေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီကလေးတွေဘယ်လိုအတန်းအစားမျိုးဖြစ်လာမှလဲ ပြီးရင် လောလောဆယ်အခြေအနေအရကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဟာရကလည်း သာမန်ကလေးတွေရသလို လုံလောက်ဖိုလှုံမှုမရှိဘူး။
အဟာရကလည်း ကြီးထွားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အမြော်အမြင်ကောင်းမှုပေါ်မှာ အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီကလေးတွေက အကယ်၍ ကြီးလာလို့ရှိရင် အလုပ်ကြမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် လုပ်ခွင့်ရပါအုံးမလားလို့ ရှူနာရှိုက်ကုန်းများဖြစ်နေမလားလို့”
KIO မှ ဒုက္ခသည်ကလေးများနှင့် ၄င်းတို့နယ်မြေတွင် ခိုလုံနေသောကလေးများအတွက် ကျောင်းများကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီး စခန်းများတွင်လည်း တတ်နိုင်သမျှစီစဉ်ပေးနေသော်လည်း ကျောင်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာ ထိုင်ခုံမှအစ ပုံနှိပ်စာအုပ်များအားလုံး လုံလောက်မှုမရှိသည့် အခက်ခဲအား ရင်ဆိုင်နေရသည်။
တဖက်တွင်လည်း KIO ကျောင်းမှ ကလေးများအား အစိုးရကျောင်းသို့ဆက်လက်သင်ယူရန် တက်ရောက်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရသောကြောင့် ကလေးများပညာရေးအခြေအနေပို၍ဆိုးဝါးလာကာ ၄င်းသည် နိုင်ငံတခု၏အနာဂတ်အတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်လာသည်ဟု ဒုက္ခသည်များကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ မိုင်ဂျာယန်ရှိ ဒေါ်မေလီအောင်ကပြောပြသည်။
“ကျောင်းကတော့ ၂ မျိုးရှိတယ် စခန်းထဲကကျောင်းနဲ့ KIO ကဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းရှိတယ် ဒါမဲ့ အဲဒီက ၁၀ တန်းအောင်တဲ့ကလေးအတွက် သူတို့ဘယ်သွားမလဲပေါ့ သူတို့အတွက် ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲပေါ့ စိတ်ပူစရာဖြစ်တယ် သူတို့အတွက်ရှေ့ရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ KIO ဖက်ကတော့ ဆရာအတတ်သင်တွေ၊ English Internship ကျောင်းတွေရှိတယ် နောက်ထပ် လက်မှုပညာတွေ သင်ပေးဖို့တော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ချင်တဲ့ကလေးတွေအတွက် ကျမတို့ဘယ်လုပ်ကြမလဲ?
ကျမတို့နိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်လာဖို့အတွက် ဒီကလေးတွေက ကျမတို့အနာဂတ်ပဲ။
ကလေးတွေရဲ့ပညာဟာ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအကန့်အသတ်သေချာလုပ်ထားခံခဲ့ရတာ။ အခုဒီဟာလည်း ဒီလို စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မို့လို့ ပညာရေးမှာသင်ယူခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် ကျမတို့တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်သလိုပဲ”
စခန်းတွင်နေထိုင်စားသောက်ရန် ငွေရေးကြေးရေးလိုအပ်သောကြောင့် ၀င်ငွေရရှိရေး စခန်းအပြင်သို့ထွက်ကာ အလုပ်ရှာဖွေနေရချိန်တွင်လည်း စခန်းအတွင်းကျန်နေသောသားသမီးများအတွက် လုံခြုံရေးနှင့် ပညာရေးလစ်ဟာမှုများရှိလာပြီး ထိုကဲ့သို့အပြင်သို့ထွက်အလုပ်လုပ်သော အမျိုးသမီးများတွင်လည်း လိမ်ညာရောင်းစားခြင်းပြဿနာများရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဒေါ်မေလီအောင်ကထောက်ပြပြော
“စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် စစ်ကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီဖက်ကနေ ၇ ချက်ဆိုတဲ့ agreement ကိုထိုးထားပေမယ့် အရမ်းကိုယျေဘုယျ ကျနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ “
နိုင်ငံတကာမှ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုကို အားစိုက်၍ အခွင့်ပေးကာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်တာဝန်ရှိသောကြောင့် မဖြစ်မနေအလုပ်နှင့်သက်သေပြရန် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရသင့်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည်များလည်း ၁ သိန်းကျော် ရှိနေပြီး ၄င်းတို့အတွက် နိုင်ငံတကာ၏ကူညီထောက်ပံ့မှုကို လုံလောက်စွာမရရှိခြင်းနှင့် အစိုးရ၏ဟန့်တားမှုများကြောင့် ပညာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်ခဲပိုမိုရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲ ဖြစ်တာ နေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေခဲ့တာ ၂ နှစ်ကြာပြီး လူအသေပြောက်များစွာ ချေလက် အဂါင်္ ချို့ယွင်းမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက် ခံစားရမှုတို့အား မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံတကာမှ ပေးအပ်ထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့် အခြားသောဆုပေါင်းများစွာအပြင် နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ စစ်ပွဲအပြီးသတ်ရပ်တန့်ရေးအား တိကျခိုင်မာစွာ အားသွန်ခွန်စိုက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မျိုး မ၇ှိကြောင်း ကချင်ဒေသခံများမှ ပြောဆိုပါသည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် တဦးက အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်အား စောင့်မျှော်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသော အခြေနေအား သူမကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြော ၀န်ခံပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီ အချို့က ထောက်ပြကြသည်။
အဆိုးဆုံးမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးပြုလုပ်နေသည်ဟု တွင်တွင်ကြီးပင် ကုန်းရုံန်းအော်ဟစ်နေသော အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ သဘောတူ ကြည်ဖြူစွာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သော (၂)နှစ်ကာလတလျောက်ဝယ် အကောင်းဖက်ထက် အဆိုးဖက်သို့ ဒယီးဒယိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည် ဦးတည်သွားနေကြောင်း သိသာသောအချက်မှာ ဒုက္ခသယ်များစွာ စစ်ပွဲကြောင့် အထိကရုန်းကြောင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များကြောင့် စစ်တပ်မှကမကထချုပ်ကိုင်ထားသော ဦးပိုင် ကုမ္မဏီကြောင့် မှားယွင်းစွာ ဆက်လက် စီမံခန့်ခွဲနေမှုကြောင့် ၊ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆီးခံရမှုကြောင့် ၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် ၊ နိုင်ငံအရေးထက် မိမိတို့၏ ပါတီ အုပ်စု စီးပွါး စသော အရေးများကိုသာ ဦးစားပေးနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း……………………….
ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်လက်များ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
at 6/17/2013 09:35:00 AM